Madaxweyne Biixi Oo Kormeeray Garroonka Hargeisa Stadium iyo Xarumo Dawladeed | Gabiley News Online
Madaxweyne Biixi Oo Kormeeray Garroonka Hargeisa Stadium iyo Xarumo Dawladeed
November 14, 2020 - Written by admin
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay garoonka kubbadda cagta ee Hargeysa Istaadiyam.
Halkaasoo ay si habmsi leh uga socdaan ciyaaraha gobollada Somaliland iyo xarumo kale oo ay dawladdu leedahay.
Kuwaasoo uu u kuur-galay hannnaanka ay shaqada qaranka ee maalinlaha ahi uga socoto.
Madaxweynaha oo socdaal lug ah kaga baxay xafiiskiisa, ayaa ugu horrayn kormeeray xafiisyada wasaaradaha Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, Waxbarashada iyo Sayniska iyo Arrimaha gudaha, gashaandhiga, xarunta badhasabaaka gobolka Maroodi-jeex.
Xarunta Guddida komishanka Mihnadlayaasha Caafimaadka waxana uu halkaa kula kulmay kuna soo dhaweeyey masuuliyiinta kala duwan ee xarumaha.
Kuwaasoo ku gudo-jirey hawl-maalmeedkooda, isla markaana madaxweynaha warbixin ka siiyey hannaanka ay shaqooyinku u socdaan.
Intaas kaddib, waxa uu madaxweynuhu kormeer shaqo oo gaar ah ku tegay garoonka kubbadda cagta ee Hargeysa Istaadiyam.
Halkaas oo ay ka socdaan ciyaaraha kubbadda cagta ee gobollada Jamhuuriyadda Somaliland oo haatan maraya heerka afar-dhammaadka.
Waxaana uu indhihiisa ku arkay diyaar-garowga ka socda garoonka iyo hawsha culus ee ay ku jiraan hawl-wadeennada ciyaaraha hagaya iyo ciidamada amniga sugayaa.
Iyadoo uu isla garoonka dhexdiisa kula kulmay salaadiinta, cuqaasha iyo siyaasiyiinta degmada Axmed-dhagax ee uu garoonku ku yaalla, kuwaas oo taageerayaasha kala duwan iyo ciyaaryahannadaba farriimo u diray.
Ugu horrayn, Suldaan Barre xaaji Xuseen Carraale, oo ka mid ah salaadiinta waaweyn ee Somaliland oo halkaas ka hadlay, ayaa madaxweynaha ku ammaanay inuu kormeero garoonka kubbadda cagta ee Hargeysa.
Waxaanu dhallinyarada taageerayaasha ah iyo ciidamada ammaankaba uu u diray farriimo salka ku haya in amniga wada-jir loo ilaaliyo.
Waxaanu yidhi, “waxan leeyahay dadkan yaryarow ciidanku ciidan meel ka yimi ma aha, ciidan ajanabi ahna ma ahee waa inamadiinnii, Booliskana waxan odhan lahaa sidaas si le’eg waa carruurtiinnii, kollayna nin wax lagu dhugtay waa damqanayaa, laakiin waxa la iidinka baahan yahay dulqaadasho.”
Suldaan Xuseen Xaaji Cabdi Cabdilaahi, ayaa isaguna dhankiisa cambaareeyey shaqaaqadii shalay ka dhacday garoonka, isaga oo shacabkana ku adkeeyey inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ilaalinaya oo aanay cadow u arkin.
“Wixii shalay halkan ka dhacay aad baan u xunnahay, wax cid loo nisbeeyana ma ahayne waxa ciyaaraha ka dhacay kamid uun buu ahaa, wax xaafad loo nisbeeyana ma ahayn, dadweynahana waxan leeyahay ciidankiinan qoryaha haysta ee idin ilaalinaya ee habeen iyo maalinba idiin soo jeeda ee aad faraha la laacaysaan hallaga daayo gacmaha” ayuu yidhi suldaan Xuseen.
Geesta kale wasiirka arrimaha gudaha, taliyaha ciidanka Booliska, Badhasaabaka gobolka Maroodi-jeex iyo siyaasi Jamaal Caydiid, oo iyaguna hadalka u kala dambeeyey ayaa ku dheeraaday ujeedda qaran ahaan laga leeyahay ciyaaraha kala duwan ee gobollada oo haatan gebogebo ku dhaw.
Waxaanay taageerayaasha ugu baaqeen inay caaddifaddooda xakameeyaan, ciyaarahana u arkaan kuwo loogu talo galay inay bulshadu isku dhexgasho oo ay kaga baxdo kala qoqobnaanta.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, oo hadalka soo gunaanaday, ayaa sheegay in ciyaaraha gobollada ee haatan dalka ka socdaa ay Somaliland u soo jiideen sumcad, isla markaana ay muujisay awoodda xirfadeed ee ciyaaryahannada Somaliland leeyihiin.
Waxaanu yidhi,“Waxan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd ee ciyaaruhu inoogu socdeen iyo ciyaartii adduunka oo dhammi ka yaabay inay Somaliland awooddaas ciyaareed leedahay, maamulkaas iyo kooxahaas sida fiican u ciyaaraya Ilaahay baa lagu mahadiyaa, Ilaahay na waxan ka rajaynayaa inay inoo sii socdaan oo ay noqdaan hawl fiican oo aynu dhammaanteen isla oggolnahay oo sumcaddeenna iyo dhallinyaradeennaba kor u qaadday, waana aannu sii wadaynaa ciyaaraha haddii Allah yidhaahdlo.”
Dhinaca kale madaxweynuhu waxa uu caddeeyey inay ciyaaruhu si nabad ah u socdaan, isagoo ammaanay ciidamada ammaanka ee amniga dhawraya.
“Qaranka, dadweynaha Hargeysa deggen, ciyaartowda iyo madaxda ciidamada waxan leeyahay waa nabad ciyaaruhuna nabad bay ku soconayaan, waynu ku filanahay, ciidamadana waan ku ammaanayaa dulqaadka iyo siday u shaqeeyeen,” ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Ugu dambayntii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu u duceeyey dhammaanba ciidamadii iyo taageerayaashii kala duwanaa ee ku waxyeelloobay shaqaaqadii ka dhacday ciyaartii shalay dhexmartay gobollada Hawd iyo Daad-madheedh.
Waxaanu dhallinyarada ku waaniyey inay shucuurtooda kaantaroolaan xilliyada ciyaaruhu socdaan, isaga oo warbaahintana uga digay inay baahiyaan inay warar fidno iyo amni-darro abuuri kara gaadhsiiyaan dhegaha dadweynaha.